Holaaladii Hoday Halganka ONLF oo Haatan Hog u Qodaya, Haybta Absame – Rasaasa News
Apr 9, 2010 beelaha, Jwxo-shiil
Waxaa muddooyinkan dambe socday dhaqdhaqaaqyo bulsho oo xoog leh, oo ku aadanaa beelaha Absame sidii ay u hanan lahaayeen degaanada ay ku leeyihiin dalka Somaliya, oo tan iyo intii uu bilowday dagaalka sokeeye ee Somaliya oo haatan labaatan jirsaday iyagu ahaa kuwo ay kolba beeli haysato gabaladooda.
Dhaqdhaqaaqyadan ayaa tan iyo intii ay bilowdeen muujiyey waxqabad muuqda, waxayna isku xidheen qurba joogta iyo dadweynaha gudaha jooga. Waxaana ka samaysmay wadan walba Jaaliyad ay leedahay beesha Absame oo haatan isku dhinac u jeedsatay, arintan oo u xuub siibatay siyaasiyan suurto galna ka dhigi karta madaxweynaha ay Somaliya yeelan doonto Shriifka ka dib in uu noqdo mid ka yimaada beesha Absame.
Isbedelkaas rajada leh ee ay muujisay beesha Absame, waxaa jira xoogag u arka shar soo kordhay, kuwaas oo kala horyimid sidii ayna marna beesha absame isu fahamteen. Cadowyada aan jeclayn wanaag iyo wada tashiga beesha Absame, waxay isugu jiraan sokeeye iyo shisheeye.
Cadowga shisheeye way idinka dhaxaysaa u quudhid la,aanta wanaaga, laakiin waxaa tiiraanyo leh sokeeye neceb wanaaga dadkiisa, isaga oo kula sheeganaya in uu ummada ka mid yahay.
Ururka ONLF, ee ay maanta saantiisu qoyan tahay waxaa gawracay, dad ka mid ah ummada Somalida Ogadeeniya oo wali lafihii hilibku ka dhamaaday feen feenanaya, waxaana kow ka ah kooxda Jwxo-shiil.
Hadaba, waxaa jiray Jwxo-shiil, laftigiisa dad siiyey talo xun oo xaasidnimo ah, taas oo keentay in uu burburo ururka ONLF. Isla dadkii ayaa maanta waxaa ay ku jiraan talo la mid ah midii ay hore ugu hawireen kooxda Jwxo-shiil, taladaasi oo maanta lagu minjo xaabinayo isu imaatinka iyo wada tashiga beesha Absame.
Dadkani wali waxay dhinaca saarayaan kooxda Jwxo-shiil, waxayna iska dhigayaan Odayaal in badan joogay oo wax garanaya, runtiise waa dad hawl gab ah oo maanta talada ay dadka ku leeyihiin ay tahay uun waxaas ayaan u soo joognay.
Dhabayaasha ay u soo qaadayaan Absame burburintiisa, waxaa weeye iyaga oo shirar aan jirin doonaya in ay ka garab qabtaan guddiga beesha Absame, waxayna hoosta kala socdaan Jwxo-shiil, oo isagu raba in uu soo dhex galo beesha Absame. Dadweynow la idinka qarin maayo ragan, waxaa horsocda dhawr duq oo jooga dalka Ingriiska, oo hada qaban qaabinaya in ay qabtaan shir Absame oo been ah laguna duminayo guddiga Absame ee Ingriiska. Ragan iyaga ah, hore looguma arag ama ma ayna qabanin shir wax tar u leh beesha Absame.
Dadka u ololaynaya in ay burburiyaan ama ay jiha wareeriyaan isku duubnaanta beesha Absame ee ku wajahan gabalada Jubooyinka; waxaa ka mid ah sida la sheegay Faarax Dahir Afey oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Somaliya ee ka yimid dhinicii maxkamadaha Islaamiga, ahna taageer Jwxo-shiil, Duraan Axmed Xaashi oo ahaa talo siiyihii koowaad ee sababay in Jwxo-shiil, galo dambiyo beeleed iyo Maxamuud Maxamed Tarax oo isagu waa dhaw uun bilaabay in uu Jwxo-shiil, uu taageero.
Ugu dambayntii beesha Absame, ayaa maanta wixii ka dambeeya u muuqata in ayna ogolaandoonin in degaanada ay ku leeyihiin Somaliya ayna ku qatanaanin, cidii isku dayda in ay xagal daaciso hawlaha Absame ugu jiro hanashada Jubooyinkan in ay fashilmi cida ay doonto ha ahaatee.